10 Uninzi lweeMbono ezihle eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi lweeMbono ezihle eYurophu
Iintlambo eziluhlaza eziluhlaza, izigodlo, yaye Iilali ezintle, IYurophu iye iindawo ezininzi ezintle ukundwendwela. Indawo nganye nganye iya kukwenza uzive ngathi ungene kubazalwana’ Iintsomi zeGrimm, kwaye i 10 uninzi lweembono ezintle eYurophu zizinto ezifanelekileyo zokubeka i-fairytale.
1. Eyona mbono intle eFrance: Intlambo yaseDordogne
Iinduli eziluhlaza eziluhlaza, umlambo omangalisayo waseDordogne, yaye 5 iilali ezimangalisayo ezifumene “eyona lali intle eFrance” award make the Dordogne valley’s one of the beautiful views in Europe. Castelnaud is one of the most charming castles in France, emi kwindawo yelali emnyama yePerigord. Iidolophana kwintlambo yaseDordogne zihlala zingafakwanga lixesha, kwaye uhambahamba kwiindlela nasezitratweni, Uyakuva ukuba ukhe wabuya umva ngexesha lokuya kuma-knights kunye nexesha leentsomi.
Eyona mbono intle eFrance yile lula ngololiwe. Unokuqeqesha uhambo ukusuka eBordeaux ngaphantsi 2 iiyure, okanye eParis engaphantsi 6 iiyure. Lo mmandla umnandi uxabiseke ngokupheleleyo ngaphezu kohambo losuku.
AmaNantes aya eBordeaux amaXabiso oLoliwe
EParis ukuya eBordeaux Amaxabiso oLoliwe
ILyon ukuya eBordeaux Amaxabiso oLoliwe
EMarseilles ukuya eBordeaux amaXabiso oLoliwe
Umbono welali entle iVernazza eCinque Terre yenye ye 10 iimbono ezininzi ezintle eYurophu. Le lali inemibala yenye ye 5 iilali ezintle, Inommandla omangalisayo waseCinque Terre. Izindlu ezintle ngasemva koLwandle lweMeditera oluhlaza okwesibhakabhaka, yenza umbono ofana nomzobo, ingakumbi emangalisa kwelanga.
Ungayithanda le mbono intle yeCinque Terre bentaba trail umbono odibanisa konke 5 emizaneni. Njengoko unyuka umzila, uya kubona izidiliya, amaphenyane okuloba, kunye neCinque Terre kubo bonke ubungangamsha bayo. Kungcono Ndwendwela iCinque Terre Ngentwasahlobo nasekwindla kuba kwimozulu yasehlotyeni iba shushu ngokunyuka intaba, kwaye ebusika umzila unokuvalwa.
ICorniglia ukuya kwiVernazza Amaxabiso oQeqesho
UFlorence waya eVernazza amaXabiso oQeqesho
I-Bologna ukuya kwiVernazza amaXabiso oQeqesho
I-Riomaggiore ukuya kwiVernazza Amaxabiso oQeqesho
3. Olona luvo luBalaseleyo eSwitzerland: Rochers De Naye
Iimbono zaseSwitzerland ndikhuthaze uninzi lweefilimu kunye nabazobi, kwaye xa undwendwela iRochers De Naye kunye nommandla weVaud, uyakuqonda ukuba kutheni. Ngelixa abahambi abaninzi benyuka intaba yaseMalatraix, Ngokwenyani kukho umbono ophefumla ngakumbi ovela kuRocher-De-Naye.
Nje ukuba uphume apho uyakube ujonge kwiLake Geneva kunye neencopho zekhephu ze iiAlps zaseSwitzerland ngasemva. Le mbono intle eRocher-De-Naye ilungele ukutshona kwelanga okanye ipikniki ukuba unomdla wokuhamba uhambo ekuseni.
Isikhululo senqwelomoya iLyon ukuya eGeneva Amaxabiso oLoliwe
ILucerne ukuya eGeneva Amaxabiso oQeqesho
4. Ummandla weMullerthal
Mullerthal Region has the loveliest views in Luxembourg. Rocky formations, iingxangxasi, kunye neendlela eziluhlaza onokukhetha kuzo, yiparadesi yokunyuka intaba. I-Mullerthal ihlala ibizwa ngokuba yi-Little Switzerland, enkosi ngokuma kwayo okumangalisayo.
Eyona mbono intle eLuxembourg nguMlambo oQinisekisiweyo kwipaki yendalo ephezulu. Ungayonwabela le ndawo intle ngokunyuka intaba Umzila wendlela kaMullerthal 1. Le ndlela yokuhamba intaba ithatha amadlelo aluhlaza, Inqaba yaseTudor, ukuyenza enye ye 10 iimbono ezintle kakhulu eYurophu.
5. Eyona mbono intle kwiRiphabhlikhi yaseCzech: IMoravian Tuscany
Amasimi aqengqelekayo aluhlaza njengesilika, Ummandla waseMoravia kwiRiphabliki yaseCzech unomdla. Luhlaza ehlotyeni, liqhuma, kwaye zinemibala entwasahlobo, imibala ye-Moravia Tuscany itshintsha kunye namaxesha onyaka. ke, nanini na xa usiya eMoravia, uya kufumana imibono eyahlukileyo ngokupheleleyo yewele laseTuscany.
Le mbono mihle eYurophu luhambo losuku ukusuka ePrague. Iidolophana ezintle zaseSardice, kunye noKarlin noMorave, nikeza ezona mbono zibalaseleyo kumasimi eMoravian.
6. Ostriya , IAlpbach
Iifama ezenziwe ngomthi ngasemva kweentaba ezigqunywe likhephu, Ilali yaseAlpbach intle. Idolophana encinci yeAlpbach imi kwenye yezona ndawo zintle zaseOstriya: Tyrol. Iingxangxasi ezintle, Iindlela zokuhamba ngokunyuka kwabahambi abanamava okanye iintsapho ezinabantwana, zininzi iindlela zokujonga ubume be-Austrian kunye nendalo.
Ukwengeza, ungadipha kumachibi afudumele aseOstriya, ezifumaneka kufutshane nale lali intle. Olona luvo luhle ngeAlpbach eOstriya lufutshane nje train ride kude nesikhululo seenqwelomoya.
IVienna ukuya kwiLandeck Ischgl Amaxabiso oLoliwe
EMunich ukuya eLandeck Ischgl Amaxabiso oLoliwe
ISalzburg ukuya kwiLandeck Ischgl Amaxabiso oololiwe
I-Zurich ukuya kwi-Landeck Ischgl Amaxabiso oLoliwe
7. Eyona mbono intle eJamani: Neuschwanstein Castle
Uluhlu lwezona ndawo zibukekayo zaseYurophu aziyi kuzaliswa ngaphandle kwembono yenqaba. Inqaba yeNeuschwanstein eJamani iinqaba ezithandekayo eJamani kwaye inikezela enye yeembono zomlingo eYurophu.
Olona luvo ludumileyo lweNqaba yeNeuschwanstein luvela kwibhulorho kaMary. kunjalo, kuyaxinana kwaye phantse kube nzima ukuthatha umfanekiso kwimbono eyaziwayo. ngoko ke, Kuya kufuneka unyuke unyuke intaba kwaye udlule kumbono weMarienbrucke. Eyona mbono intle eJamani inyuke ngendlela ye-zig-zag, ukusuka kwiqonga elibiyelweyo.
8. Inetherlands, Ilali yaseZaanstad
I-Holland idume ngee-tulips zayo kunye neendawo zomoya, misele, kunye needolophu ezinomtsalane. ngoko ke, Akumangalisi ukuba enye yezona ndawo zintle kakhulu eNetherlands zinazo zombini. Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo lokuhamba ngentwasahlobo, kufuneka undwendwele ilali yaseZaanstad. Apha uya kufumana iipilisi zomoya ezisebenzayo kunye neentyatyambo eziqhakazileyo kuyo yonke imibala yomnyama.
IBremen ukuya kumaxabiso oololiwe eAmsterdam
IHannover ukuya kumaxabiso oololiwe eAmsterdam
IBielefeld ukuya kumaxabiso oololiwe eAmsterdam
IHamburg ukuya eAmsterdam Amaxabiso oololiwe
9. Eyona mbono intle eHungary: IGellertberg Hill eBudapest
Umbono wepalamente yaseHungary yenye yezona mifanekiso zidumileyo zeBudapest. Ungawuthatha lo mbono uphefumlayo ukusuka eGellertberg Hill. at 235 m, uya kuba nakho ukubona iDanube River kunye nembonakalo entle ye-Budapest.
Kwimibala yokutshona kwelanga eorenji, izibane zasebusuku, okanye ngosuku olucacileyo lwesibhakabhaka, izimvo ziyamangalisa. Ngaloo ndlela, Umbono weGellertberg Hill wenze ukuba wethu 10 iimbono ezintle kakhulu eYurophu.
10. I-Chateau De Crevecoeur kwisidlo sangokuhlwa
Ilali entle yeDinant yenye yeelali ezithandekayo nezizodwa eYurophu. Eyona mbono intle kakhulu yesidlo sangokuhlwa, ibandla, umlambo, Kwaye iMeuse Valley ivela eChateau de Crevecoeur, Ibhotwe elibuhlungu.
Ukulawula indawo enamatye ekalika, Le nqaba inomtsalane ijonge isidlo sangokuhlwa ukusukela kwinkulungwane ye-13.
IBrussels ukuya kumaxabiso oololiwe eDinant
the 10 iimbono ezininzi ezintle eYurophu ziinduli eziluhlaza, apho kuphela ngabaphuphi abanesibindi abanobuganga bokuya khona. Eyona ikhethekileyo, Iimbono zaseYurophu zilindele abo bajonge engaqhelekanga, iindawo ezingaphandle kwendlela, kude nezihlwele.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise iholide yakho ukuya 10 iimbono ezininzi ezintle eYurophu ngololiwe.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "I-10 yeembono ezintle eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha ru to / fr iilwimi / okanye / de yaye ngaphezulu.
BeuatifulViewpoints BreathtakingViews EuropeByTrain train Travel TravelingbyTrain izimvo